Ampidino IObit Driver Booster ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (25.00 MB)
Ampidino IObit Driver Booster,
IObit Driver Booster 8 dia programa maimaimpoana ahafahana mahita mpamily, manavao ny mpamily ary mametraka mpamily tsy misy Internet. Fitaovana maimaimpoana voaomana ho antsika io mba hialantsika aminireo olana fanavaozana ny mpamily izay matetika sendra antsika aminny solosainantsika Windows, ary navoakanny IObit, orinasa iray efa za-draharaha aminireo raharaha ireo. Ny zava-misy fa ny ankamaroantsika dia sahirana aminny fanarahana mpamily farany aminny solosaina PC ary tsy afaka manala fotoana aminizany dia mahatonga ny Driver Booster iray aminireo programa ilaina indrindra.
Sintomy ny IObit Driver Booster
Rehefa mampiasa ny programa dia tsy mila manao zavatra be loatra ny mpampiasa ary mahita ny mpamily mety indrindra aminny solosainao ny fampiharana ary mametraka azy. Aminizany fomba izany dia azonao antoka fa ireo mpamily ampiasainao aminny asa, ny lalao na ny haino aman-jery multimedia dia apetraka aminny fomba tsara indrindra.
Driver Booster, izay manome serivisy maimaim-poana aminny fanavaozana ny mpamily, fanavaozana ny mpamily efa lany andro, fanavaozana ny mpamily mandeha ho azy, fanavaozana ny mpamily Windows 10, fanavaozana mpamily azo antoka ary mpamily solosaina maro hafa, mamonjy ireo mpampiasa solosaina aminny olana lehibe.
Databata mpamily be dia be: manana fehin-kevitra ratsy na tsy kalitao feo aminny PC-nao? Ireo dia mety ho vokatry ny karatra horonantsary efa lany andro sy ny kara-panondrom-peo tsy eo. Ho anny fampisehoana PC tsara indrindra dia mety mila Driver Booster ianao hanavao ny mpamily sy ny lalao lalao 4500000. Ny mpamily rehetra alaina dia avy aminny tranokalanny mpanamboatra ofisialy ary efa nandalo ny andrana Microsoft WHQL sy ny fitsapana IObit hiantohana ny fiarovana.
Fanavaozana ny mpamily tsy misy Internet: Nisy ny toe-javatra nanandramanao manavao ireo mpamily Network Card hahafahanao mifandray rehefa very ny internet. Fitaovana fanavaozana ny mpamily ivelanny mpamily Booster dia afaka manampy anao. Manome vahaolana mora izay manampy mialoha ny fampidinana ireo mpamily. Driver Booster dia afaka manavao ireo mpamily tsy misy Internet rehefa tsy afaka miditra aminny Internet ianao.
Amboary ny olanny Windows: Mety efa sendra rafitra nianjera na olana manga ianao, vokatry ny hadisoanny mpamily sasany. Driver Booster dia manolotra fitaovana mahasoa sasany hamahana aminny fomba mahomby ny olanny Windows mahazatra. Afaka manamboatra olana manga efijery vokatry ny lesoka fanavaozana ny mpamily. Izy io koa dia manohana ny fanitsiana ny ankamaroanny olanny feo sy ny tsy fahombiazanny tambajotra ho anny traikefa mpampiasa tsaratsara kokoa.
Fanavaozana ny mpamily haingana: Driver Booster dia mpamily mpamily mety ho anao. Izy io dia afaka manampy aminny famitana sy fanavaozana ireo mpamily efa lany andro. Ary koa, ny hafainganam-pandehanity scanner ity dia nohatsaraina efa ho 100%; manome anao fotoana bebe kokoa hahalalana ny satanny fiara izany. Azonao atao ihany koa ny mamela ny fanavaozana ny mpamily mandeha ho azy mba hahazoana ny fanavaozana farany aminny fotoana tena izy.
IObit Driver Booster 8 manasongadina;
Fanavaozana ny mpamily sy ny singa ho anny fahombiazanny PC sy ny lalao tsara indrindra
Tsindrio iray monja aminireo mpamily sy lalao aminny lalao 4.500.000 mahery
Fametrahana mpamily ivelanny daholobe vaovao, fanavaozana ireo fitaovana ho anny famerenana aminny laoniny ny rafitra na fametrahana indray
Ny hafaingananny fanavaozana ny mpamily dia nitombo 30% ho anny traikefa tsara kokoa.
Raha misy lesoka ao aminny rafitrao rehefa mametraka ny mpamily nomenny IObit Driver Booster ianao dia afaka miverina avy hatrany any aminny mpamily taloha hanafoana ireo hadisoana ireo na mitsidika ny ivon-toerana fanarenana hahazoana safidy mandroso kokoa.
Noho ny fivoaranny fitehirizam-bokinny mpamily dia azonao atao ny mameno ny fanavaozana ny mpamily maro izay tsy fantatrao raha tsy mikaroka Internet, mba hahafahanao mahazo antoka fa mandeha tsara sy milamina kokoa ny solosainao.
Driver Booster, izay afaka ampiasainireo izay tsy tia manao fikolokoloana solosaina, hampandeha automatique ny fizotry ny fametrahana mpamily rehetra, dia anisanireo fampiharana tsy maintsy ananana.
Haben'ny rakitra: 25.00 MB